Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. कर्णालीमा हिमपात – Emountain TV
जुम्ला,१ फागुन । कर्णालीमा सोमबार हिमपात भएको छ । जुम्ला, हुम्ला, मुगु र डोल्पामा साँझसम्म हिउँ परेको छ भने कालिकोटका उच्च भेगमा पनि हिउँ पर्न थालेको छ । हिमपातसँगै कर्णालीमा चिसो हात्तै बढेको छ ।
जनजीवन प्रभावित भएको छ । जुम्लामा यस वर्ष माइनस ११ डिग्री सेल्सियससम्म चिसो बढेको हावापानी फिल्ड कार्यालयले जनाएको छ । सोमबार बिहानैदेखि चिसो बढेपछि दिउँसोबाट हिउँ पर्न सुरु भएको हो । चिसोका कारण विद्यालयहरू बन्द भए । सरकारी कार्यालयमा समेत सेवाग्राही नआएका कारण कर्मचारीहरू आगो तापेर बसेका थिए । दिउँसो दुई फिटभन्दा धेरै हिउँ परेको छ । मंगलबारसम्म हिउँ पर्ने हावापनी फिल्ड कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ । हुम्ला सिमकोट बजारमा करिब दुई फिटभन्दा बढी हिउँ जमेको छ । हिउँपर्ने क्रम जारी रहेको सिमकोटका राजन रावतले बताए ।
हुम्लाको उत्तरी तिब्बत सीमा क्षेत्रसँग जोडिएका बस्ती यारी,लिम, बुचुलगायत बस्तीमा भारीहिमपात भएको छ । हिमपातले तिब्बती हिल्सा नाका अवरुद्ध बनेको छ । हवाई सेवा पनि अवरुद्ध भएको छ । गाउँबस्तीबाट सिमकोट बजार आउजाउ गर्न स्थानीयलाई असहज भएको छ । यो वर्ष हुम्लामा तीन पटक हिउँ परिसकेको छ । मुगुमा सोमबार मध्यान्हदेखि ताल्चा, रारा, मुर्मा, सोवा, बाम, कोटिल्लालगायत गाउँहरू हिउँले सेताम्मै भएका छन् । उक्त गाउँबस्तीमा करिब ५ इन्चभन्दा बढी हिउँ जमेको छ । आइतबार रातिदेखि मौसममा परिवर्तन भई सोमबार मध्यान्हबाट हिमपात भएको हो ।
यो हिउँदमा दोस्रो पटक हिउँ पर्दा चन्दननाथ १० का किसान तुफान शाही निकै खुसी देखिन्थे । लामो समयसम्म हिउँ नपरेपछि हिउँदे बालीको उत्पादन घट्ने डरले चिन्तित उनी हिउँ परेपछि खुसी भए । लामो समयसम्म हिउँ र पानी नपरेपछि हिउँदेबाली सुक्ने र खडेरी पर्ने डरले किसान चिन्तित थिए । हिमपातले हिउँदेबालीहरूजौ, गहुँ र स्याउलाई फाइदा पुग्ने किसान शाहीले बताए ।
‘जुम्लामा पानी र हिउँ नपर्दा खडेरी पर्ने अवस्थामा पुगिसकेको थियो,’ उनले भने, माघको दोस्रो साता थोरै हिउँ पर्‍यो । अहिलेको हिउँले सिँचाइ पुग्छ । समयमै हिमपात नहुनु जलवायु परिवर्तनको असर रहेको स्थानीय किशोर न्यौपानेले बताए । ‘जलवायु परिवर्तनले जुम्लालाई असर गरेको छ,’ उनले भने, ‘गत वर्षहरूमा पुसमै हिमपात हुने गरेको थियो । तर यस पटक माघको अन्तिममा मात्र हिमपात भयो ।’ स्याउ खेतीका लागि हिउँ पर्नु आवश्यक भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ । अधिकांश किसानहरूलेस्याउ बगैंचामा हिउँबाटै सिँचाइ गर्नेगरेको वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत भरतप्रसाद कँडेलले बताए ।
‘यहाँको दक्षिण मोहोडा भएको क्षेत्रमा स्याउ बगैंचा धेरै छन्,’ उनले भने, ‘जुम्लामा स्याउका लागि हिउँ वरदान हो ।’ यस पटकको हिउँमा पानी मिसिएकाले माटोमुनिसम्म चिस्यान हुने उनले बताए । मुगुमा पनि गत भदौदेखि राम्रोसित वर्षा नहुँदा जौ, गहुँ सुकेर किसान चिन्तित थिए । आजको कान्तिपुर दैनिकमा यस्तो खवर छ ।